Fampidirana ny Departemantan'ny kalitao - Wellink
Wellink Industrial Tech (Shenzhen) Co., Ltd. Misy mpiasa maherin'ny 10, anisan'izany ny 90% manana mari-pahaizana licence, mihoatra ny 20 karazana fitaovana fitiliana isan-karazany, feno fitaovana amin'ny fitsapana sy ny fanadihadiana ny vokatra isan-karazany ny orinasa, ary nahazo ISO9001 fanamarinana rafitra kalitao, fanamarinana fiarovana ny tontolo iainana ROHS, CE, fanamarinana FCC, fanamarinana nasionaly 3C, sns.
Rafitra fandaminana ny Departemantan'ny kalitao
Ny sampana fitantanana kalitao dia miasa.
1, Mandamina ny drafitra, ny fampiharana, ny fanaraha-maso ary ny famerenana ny rafitra fitantanana kalitao anatiny ao amin'ny orinasa.
2, tompon'andraikitra amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fanamarinana vokatra.
3, manomana ny fanaraha-maso fenitra sy ny fisafoana fepetra arahana ara-teknika antontan-taratasy;mandamina sy mampihatra ny fanaraha-maso ny akora, ny kojakoja avy any ivelany, ny kojakoja novidina sy ny kojakoja namboarin-tena, ary koa ny fanaraha-maso ny fizotran'ny vokatra sy ny vokatra vita, ary ny famoahana tatitra momba ny fisafoana.
4, Mandamina ny famerenana anatiny ny vokatra tsy mifanaraka, mandamina ny fampandrosoana ny fanitsiana, fisorohana sy fanatsarana fepetra ho an'ny olana momba ny kalitao, ary manara-maso sy manamarina.
5, tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ankapobeny ny firaketana momba ny kalitao, ny famakafakana sy ny fanombanana ny kalitao tsy tapaka.
6, tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra orinasa manontolo.
7, Tompon'andraikitra amin'ny asa fitantanana fandrefesana, fenoy ny calibration tsy tapaka ny fitaovana fandrefesana ary manao calibration firaketana sy ny marika.
8, tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso sy ny fandrefesana ary ny fitaovana fitsapana mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra voafaritra ny kalitaon'ny vokatra.
9, Mandraisa anjara amin'ny famerenana ny mpamatsy, mandray anjara amin'ny famakafakana sy fanodinana ny valin-tenin'ny mpampiasa.
Politika momba ny kalitao.
Fandraisana anjara feno, kalitao avo lenta sy fahombiazana, fanatsarana mitohy, fahafaham-po amin'ny mpanjifa
Fitaovana fitiliana kalitao